Aqriso…Laacibiintii Aduunka Ugu Hantida Badnaa Ee Shiiday ! | Xaqiiqonews
Aqriso…Laacibiintii Aduunka Ugu Hantida Badnaa Ee Shiiday !
Inkastoo Lacago Malaayin ah ay jeeb ku ridteen intii ay ku jireen garoomaha, tiro ay yareyn oo ka mid ah xiddigahaasi ayaa ku fashilmay in xajistaan hantidooda,.
Tusaalaha waxaa ka mid ah laacibka rer Argentina Diego Maradona(diyooga Maaradoona) iyo xiddigii hore ee Brazil Ronaldinho(ronaaldiinyo) kuwaasi oo ku fashilmay in ay ku horumariyaan nolashooda meel dibadda ka ah roogga cagaaran.
Waa kanaa liiska qaar ka mid ah xiddigaha ugu caansan, kuwaasi oo ku fataalay hantidooda, ka dib markii ay ka fadhiisteen kubadda cagta.
-Xiddiga Reer Ghana Asamoah Gyan
Ninka ugu goolasha badan xulka Ghana, kana soo ciyaaray horyaalka Ingiriiska Asamoah Gyan waxa uu dhawaan shaaciyey in xisaabtiisa bankiga ay ku harsan tahay oo kaliya 760 doolar.
Gyan waxa uu qaadan jiray $228 kun oo doolar todobaadkiiba, mar uu ka ciyaareyey horyaalka shiinaha sanado yar ka hor.
-Laacibkii Brazil Ronaldinho
Lajandihii Brazil ahaana Laacibkii Barcelona Ronaldinho hadda waxa uu ku qaameysan yahay deen qiimaheedu dhan yahay $ 2.2 million oo doolar.
Ronaldinho, 10 sano ka hor waxa uu ka mid ahaa ciyaartooda dunida ugu fiican, hase yeeshe qorsha xumadiisa nolasha ayaa ku kaliftay wax badan.
Ninka Rer Argentina Deigo Maradona
Ninkani ayaa ku dhawaaqay in uu shiiday 9 sano ka hor, sidaasi oo ay tahayna maxkamad Taliyaani ayaa ku amartay in uu bixiyo lacag dhan $50 Milyan oo doolar oo ah cashuur oo ka dhuuntay xilligii uu u ciyaari jiray Napoli 1980-kii.
Ciyaaryahankii ingiriiska Paul Gascoigne
Markii uu ka fadhiistay ciyaaraha noolasha ciyaaryahankan ayaa isku badashay “Bilaash” ka dib markii uu la qabsaday Alchohol-ka iyo Maandooriyaasha, deymaha lagu leeyahayna waxa ay gaareen $ 250 kun oo doolar.
goolhayihii Rer Ingiriis David James
Goolhayii heerka Caalami ee Ingiriiska David James, waxaa uu ka cawday “Furiin” burburiyey noolashiisa, ninkani ayaa shaqeystay lacag dhan 25 milyan oo doolar intii uu ku jiray garoomaha, furitaankii xaaskiisa ayaa uu kaga baxay qarash badan ilaa ugu dambeyn uu faafiyey shiidnimadiisa sanada yar ka hor.
Ciyaaryahanka rer Norway John Arne Riess
Ninkani ayaa baahiyey in uu noqday “Shiid” labo sano un ka dib markii uu kooxda Liverpool kula guuleystay Horyaalka Yurub ee “Champions League”, dowladda wadankiis ayaana ka dalbatay qarash aad u badan oo ku saabsan kanaax, isagoo lagu soo eedeeyey in uu si xun u maamulay lacagihiisa.